नेपाली भूमिमा भारतीय नागरिकको बस्ती, बस्ति खालि गर्न पहल चालिने नगर प्रमुख तपेन्द्र रावलको भनाई
टीकापुर २६ फागुन,
टीकापुर नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ स्थित नेपाली भूमिमा भारतीय नागरिकका द्ुई वटा बस्ती बसेका छन् । वडा नं. ९ को मोहना पुल पारी ९ घर र वडा नं. ८ को चौगुर्दीमा २६ घर गरि ३५ घरको छुट्टा छुट्टै दुई वटा भारतीय नागरिकका बस्ती बसेका हुन् ।
स्थानीय नागरिकहरुले भारतीय नागरिकबाट रकम लिएर बस्ती बसालेको गुनासो छ । सिमा क्षेत्रका ऐलानी जग्गा भएको र स्थानीयले भारतीयलाई बेचेर धमाधम बस्ती बस्न थालेपछि नेपाली भुमी कब्जा हुने देखिन्छ ।
यसरी नेपाली भुमी भारतिय नागरिकले कब्जा गरी बस्ती बस्न थालेपछि हटाउनु पर्ने स्थानीयले माग गदै आएका छन् । शनिवार टीकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तपेन्द्र रावल लगायत कालाकुण्डा प्रहरी चौकीका ईन्चार्ज रघुनाथ भण्डारी र पत्रकारको टोलीले भारतीयले कब्जा गरि बसेका बस्तीको अनुगमन गरेको छ ।
नगर प्रमुख रावलले नेपाली भुमीमा भारतीय नागरिकको बस्ति बस्नु अस्वभाविक र निन्दनिय भएको बताउनुभयो । रावलले बस्ती खाली गर्न नगरपालिकाले छिट्टै पहल चाल्ले बताउनु भयो । उहांले नेपाली भुमी कब्जा गरि बसेका र सरकारी जमिन कब्जा गरि बसेकाको खोजि गरि तत्काल खालि गराईने तयारीमा नगरपालिका रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सिमा क्षेत्रसम्म कालोपत्रेको योजना दशजगा क्षेत्रभित्र परेको भन्दै भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ । कालोपत्रेका लागि तयारी भइरहंदा भारतीय पक्षले दशजगा क्षेत्र परेको भन्दै अवरोध जनाएको हो ।
उता, भारतीय पक्षले मोहना पुलपारी लामो समयदेखि पसल संचालन गरी बसिरहेका नेपाली नागरिकलाई भारतको भूमि हो भन्दै खालि गर्न निर्देशन दिएका छन् । भारतीय एसएसबीले दश गजा क्षेत्रभित्र र भारतिय भुमि भएको भन्दै खालि गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । नेपालले बनाउन लागेको कालोपत्रे सडकको केहि भाग दशगजा क्षेत्रभित्र परेको भन्दै कालोपत्रेको काम पनि अवरोध हुने देखिन्छ ।